Ny tantaram-pitiavan'i Troy Deeney momba ny tantaram-pianakaviana tsy hita isa
Home TOROHEVITRA FOTSORATRA TSY MISY MPANJAKA Mpilalao Football English Ny tantaram-pitiavan'i Troy Deeney momba ny tantaram-pianakaviana tsy hita isa
Ny LB dia manolotra ny tantara manontolo momba ny olona fantatra amin'ny anarana; "Dee". Ny tantaran'ny tantaram-pitiavan'i Troy Deeney momba ny tantaram-pitiavan'olon-tiana mihoatra ny tantaran'ireo bitsika dia mitondra fitantarana feno momba ny zava-nitranga mahatalanjona hatramin'ny fahazazany hatramin'izao. Ny fanadihadiana dia midika ny tantaram-piainany talohan'ny lazany, ny fiainam-pianakaviana ary ny zava-misy tsy fantatra firy momba azy.
Eny, fantatry ny rehetra ny momba ny tanjony manatsara ny fahaiza-manao, saingy vitsy no mihevitra fa ny Bio Bio Troy Deeney dia tena mahaliana. Amin'izao fotoana izao, raha tsy misy adieu, dia aoka isika hanomboka.
Troy Deeney Tantara an-tsarimihetsika malaza tsy mbola voatanisa -Voalohandohan'ny fiainana
Troy Matthew Deeney dia teraka tamin'ny andro 29 tamin'ny 1988 Desambra tany West Midlands, Birmingham, Angletera. Teraka tamin'ny reniny, Emma Deeney izy ary rain'i Paul Anthony Burke. Troy dia nihalehibe tao Chelmsley Wood. Izy dia iray amin'ireo zanaka telo niteraka ny ray aman-dreniny izay nisaraka tamin'izy 11 taona. Ny famaritany azy ireo dia nanamarika ny fiandohan'ny fanabeazana mahatsiravina iray izay hazavaina amin'ny fiainany teo aloha.
Tsara ny manamarika fa hatramin'ny taona 14, ny baolina kitra dia tsy nanomboka ho an'i Troy. Rehefa nisaraka ny ray aman-dreniny dia ny tanjona voalohany dia ny hamita ny fianarany. Voalohany dia noroahina tany an-tsekoly i Troy fony izy 14, talohan'ny niverenany tamin'ny taona 15. Ny tanjony amin'ny fanabeazana efa vita dia tsy nahatakatra. Niala tao an-tsekoly izy tamin'ny 16 tsy nisy GCSEs ary nanomboka nampiofana ho mpangalatra, ka nahazo £ 120 isan-kerinandro.
Troy Deeney Tantara an-tsarimihetsika malaza tsy mbola voatanisa -Rising to Fame
Taorian'ny fandinihana ny fianarana dia tsy ny antsony akory, nanapa-kevitra ny hitondra ny baolina kitra ho fialantsiny farany i Troy. Taorian'ny fanaovana fangatahana maro, dia nasaina izy Aston Villa akademia handray anjara amin'ny fitsarana mandritra ny efatra andro antoandro mba hahazoana fifanarahana amin'ny tanora. Na izany aza, tsy nahatratra ny telo andro voalohany izy. Nanjary diso fanantenana ny klioba satria tsy nanome azy fifanarahana.
Na izany aza, na dia teo aza ny fahadisoam-panantenan'i Villa, dia nisy klioban'ny klioba Chelmsley izay nampiharany azy taloha. Raha tao Chelmsley izy, dia nadinin'ny Loham-pahefana an'ny Tanora Walsall Mick Halsall, izay nanatrika ny lalao Deeney ihany no nilalao satria nilalao ny zanany lahy ihany koa noho ny lalao izay natrehiny hanatrika azy.
Deiney dia nilalao nandritra ny mamo, fa nahazo tanjona fito tamin'ny fandresena 11-4. Ilay mpiloka mimamo dia nanolotra avy hatrany ny fitsarana tao Walsall saingy nanatrika fotsiny ihany taorian'ny nanesorany ny lehiben'ny Chelmsley azy tany am-pandriana ary nandoa ny taxi.
Ny fampidirana Chris Hutchings satria nifanandrify tamin'ny Deeney ny mpikaroka tamin'ny fikarakarana tokotokony. Amin'ny maha-olona te-hahomby azy, dia i Deeney tamin'ny 4th of August 2010, natolotra tamin'ny fangatahana fandraketana an-tsoratra tao anatin'ny fahalianana avy amin'ny klioban'ny mpilalao. Watford no nanam-bintana niaraka tamin'ny sonia. Ny ambiny, araka ny filazany, ankehitriny dia tantara.
Troy Deeney Tantara an-tsarimihetsika malaza tsy mbola voatanisa -Tantaran'ny fonja
Tamin'ny 25 June 2012, dia nogadraina am-ponja nandritra ny folo volana i Deeney noho ny nandosirany lehilahy iray teny an-doha nandritra ny daroka baomba. Nafahana izy rehefa avy nanompo nandritra ny telo volana nialoha ny saziny, taorian'ny fampisehoana ny neniny, ary ny hoe izy dia mpanafika voalohany. Hatramin'ny nanafahana azy tany am-ponja tao 2012, nahazo ny GCSE tamin'ny teny Anglisy, Siansa ary Maths izy.
Troy Deeney Tantara an-tsarimihetsika malaza tsy mbola voatanisa -Fifandraisana sy ny Fiainam-pianakaviana
Deeney dia manambady an'i Stacey Deeney, vadiny tsara tarehy. Manana zanakalahy, Myles, ary zanakavavy Amelia izy.
Troy Deeney dia teo amin'ny tsikirikiny tsy miankina amin'ny Arsenal ihany hatramin'ny nanambarana ampahibemaso fa mpilalao baolina fandaka ny zanany lahy. Ilay zazalahy kely voatanisa miaraka amin'ny mamanay ambany dia tsy manana antony hanakanana ny endriny manokana ho an'i Arsenal.
Troy Deeney Tantara an-tsarimihetsika malaza tsy mbola voatanisa -Fiainana manokana
Troy Deeney dia manana ny toetrany amin'ny toetrany.
Ny Tanjon'i Troy Deeney: Izy no tompon'andraikitra noho ny hatramin'izay. Ankoatra izany, dia nofaizina izy, manana fifehezan-tena ary mpitarika ankehitriny.
Ny fahalemen'i Troy Deeney: Indraindray, ny zavatra ataony dia tia azy-izy-ny rehetra. Mety ho tsy mamela heloka izy ary manantena foana ny ratsy indrindra.
Inona no toetran'i Troy Deeney mitia sy tsy tiany? Tiany ny fianakaviany, ny lovany. Troy dia olona mety tsy ho tia ny zava-drehetra amin'ny lafiny iray.
Ho famintinana, i Troy Deeney dia olona matotra ara-boajanahary. Manana toetra mahaleo tena izy, izay ahafahany manao fandrosoana lehibe eo amin'ny fiainany manokana sy matihanina. Hatramin'ny nigadra, dia lasa tompon'ny fifehezan-tena i Troy. Manana ny fahafahana hitarika ny làlana izy, ka hanao drafitra matanjaka sy realistika eo amin'ny fiainany sy ny an'ny fianakaviany.
Troy Deeney Tantara an-tsarimihetsika malaza tsy mbola voatanisa -Fiainana ao amin'ny fianakaviana
Nandiso fanantenana azy ny ray aman-drenin'i Troy Deeney satria tsy afaka niara-nonina izy ireo tamin'ny fotoana nilany azy ireo. Ny tsara indrindra dia avy amin'ny fianakaviana iray ao afara izy.
rahalahiny avy; Ny rahalahin'i Troy, Ellis, dia mpilalao baolina semi-mpilalao matihanina izay mpilalao baolina afovoany. Nanomboka ny asany tany Aston Villa i Ellis, toerana nahitany azy ho kapitenin'ny ekipa akademia talohan'ny namoahana azy.
Ankehitriny, Ellis dia mpampiofana manokana, ary i Deeney dia nanampy tamin'ny fanofanana ny fampiofanana amin'ny asa.
FACT CHECK: Misaotra ny famakiana ny tantaram-pitiavan'i Troy Deeney momba ny tantaram-pitiavana sy ny zava-misy marina momba ny zavakanto. amin'ny LifeBogger, dia miezaka izahay mba hahatontosa ny marina sy ny rariny. Raha mahita zavatra izay tsy mijery ity lahatsoratra ity ianao dia mametra ny fanamarihanao na Mifandraisa aminay!.
Abdoulaye Doucoure tantara an-tsarimihetsika momba ny tantaram-pianakaviana mbola tsy fantatra
Richarlison Childhood Story Plus tsy misy fitantarana momba ny tantaram-piainana